व्यक्तिगत कोचिंग - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
कार्ल डिक्सनबाट प्रशंसापत्र
"म डेभिड प्रयोग गर्दछ मलाई मलाई काममा राख्न र एक दिन व्यापारी लगानीकर्ताको रूपमा, मेरो ट्रेडिंग प्रदर्शनको शीर्षमा। त्यहाँ मानसिक ट्रेडिंग कोचहरू छन् जसले समान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छन् तर यसले to देखि months महिना लाग्छ र हजारौं डलर खर्च गर्दछ। डेभिडको प्रयोग गरेर, म केही हप्तामा त्यो ठाउँमा पुग्न सक्षम भएँ र डेभिड प्रयोग गर्दा मलाई 'मानसिक' ट्युनमा राख्दछ। म हरेक दिन मेरो डेभिड प्रयोग गर्दछु। "
नोएल थॉमसबाट प्रशंसापत्र
नोभेम्बर 17, 2000
“म तपाईंको ओम्निस्क्रिन बत्तीमा तपाईंलाई उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिन लेख्दैछु। यो विगतको वसन्त सेमेस्टर म अर्को हप्ताको मध्यमा भन्दा पहिले मेरो कलेज बायोकेमिस्ट्री कोर्सको लागि आठ जटिल अध्यायहरू पढ्न र अध्ययन गर्न सप्ताहन्त समर्पित गर्न बाध्य भएको थियो (ढिलाइ र व्यस्त तालिकाको कारण, कम!)। मेरो सामान्य ध्यान अवधि र ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी दुई घण्टा निरन्तर अध्ययन गर्न को लागी मलाई थोरै "फ्राइड" महसुस गर्नुभन्दा पहिले र उही लाइन फेरि दोहोरिएको पाउनुहुन्छ। खेलको यस चरणमा, मसँग फाँसी गर्ने समय थिएन र सूचनाको LOTS राख्न योग्य हुन आवश्यक छ। मैले तपाईको बत्तीको प्रयास गर्ने निर्णय गरें, एक मित्रको स्वामित्वमा। मैले यसलाई मेरो पुस्तकहरूमा राखें र यसलाई मेरो डेभिड प्याराडाइज मार्फत १ 15 हर्ट्जमा लगातार फ्ल्यास गर्न प्रोग्राम गर्‍यो।
मेरो अध्ययन गर्ने क्षमतामा भिन्नता उल्लेखनीय थियो। मेरो मस्तिष्क द्वारा प्रतिक्रिया बजार मा लोकप्रिय मस्तिष्क पोषण द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा परे थियो। मैले निरन्तर सतर्कता र ध्यान केन्द्रित गरें जबसम्म मैले अध्ययन जारी राख्नको लागि छनौट गरे। म राम्रो तरलता संग बुझ्दै गर्दा म द्रुत अधिक चाँडै पढ्न सक्षम थिएँ। मेरो अचम्मको लागि, मैले आठ दिनहरूमा थोरै थकान महसुस गरेको आठवटा अध्यायहरू पूरा गरें र मेरो ज्ञानको बारेमा विश्वस्त थिए।
यसमा कुनै श doubt्का छैन कि मैले अध्ययनको क्रममा दुबै सतर्क र आराम पाएको महसुस गरेको परिणामस्वरूप मैले सुधारिएको मेमोरी रिटेन्सन अनुभव गरें। विश्वास गर्नुहोस्, म यो चुनौतीपूर्ण परीक्षामा मेरो A ग्रेडसँग धेरै खुसी छु! पक्कै पनि म समान रूपमा लाभदायक परिणामहरूको साथ अन्तिम परीक्षा अघि सहयोगको लागि बत्तीको फेरि प्रयोग गर्‍यो। सब भन्दा निश्चित रूप मा म सबै भन्दा राम्रो मस्तिष्क उपकरण को रूप मा ओम्निस्क्रिन बत्ती सिफारिस गर्दछ सबैलाई अध्ययन गर्न र सिक्न मद्दत गर्न!
यस्तो चलाख आविष्कारको लागि धन्यवाद !! "